I-drone payload ikhamera yamalensi amaningi wokuthwebula izithombe ezitshekile - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Izicelo zekhamera ye-Drone Multi-Lens
Izithombe ezithathwe amakhamera e-oblique zikhiqiza amamodeli e-3D anokulungiswa okuphezulu kanye nemininingwane yezindawo lapho ikhwalithi ephansi, ephelelwe yisikhathi noma ingekho idatha, etholakalayo. Benza kanjalo vumela amamephu e-cadastral anembe kakhulu ukuthi akhiqizwe ngokushesha futhi kalula, ngisho nasezindaweni eziyinkimbinkimbi noma ezinzima ukufinyelela kuzo. Abahloli bangakwazi futhi ukukhipha izici ezithombeni, njengezimpawu, ama-curbs, izimpawu zomgwaqo, izintambo zokucisha umlilo namadrayini.
Ubuchwepheshe bokuhlola i-Aerial Survey ye-UAV/drone nayo ingasetshenziswa ngendlela ebonakalayo nesebenza kahle kakhulu (izikhathi ezingaphezu kwezingu-30 ngaphezu kokusebenza kahle kwezandla) ukuze kuphothulwe ucwaningo lokusetshenziswa komhlaba. Ngesikhathi esifanayo, ukunemba kwale ndlela nakho kuhle, iphutha lingalawulwa ngaphakathi kuka-5cm, futhi ngokuthuthukiswa kohlelo lwendiza kanye nemishini, ukunemba kungathuthukiswa ngokuqhubekayo.
Ukuhlela idolobha, Ukuphathwa kwedolobha okudijithali, Ukubhaliswa kwezindawo ezithengiswayo
Imodeli yezithombe ze-oblique ingokoqobo, inembile kakhulu futhi isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kokugcina emuva. Ngokusekelwe kulo modeli, ingahlanganiswa ohlelweni lwesicelo sokuphathwa kwe-back-end ukuze ihlaziye njengenethiwekhi yamapayipi angaphansi komhlaba, ukuphathwa kwethrafikhi okuhlakaniphile, izimo eziphuthumayo zomlilo, umshini wokulwa nobuphekula, ukuphathwa kolwazi lwezakhamuzi zasemadolobheni, njll. Izinhlelo eziningi zokuphatha zingahlanganiswa endaweni eyodwa futhi izimvume zabo zokufaka izicelo zingabelwa iminyango efanele ukuze kuzuzwe ukuphathwa okuhlangene nokusebenzisana kweminyango eminingi.
Isibalo somsebenzi womhlaba,Isilinganiso sevolumu,Ukuqapha ukuphepha
Ngesofthiwe yemephu ye-3D, ingakala ngokuqondile ibanga, ubude, indawo, ivolumu kanye nenye idatha kumodeli ye-3D. Le ndlela esheshayo neshibhile yokulinganisa umthamo iwusizo ikakhulukazi ekubaleni amasheya ezimayini nasezinkwalini ngezinhloso ze-inventory noma zokuqapha.
Ngokusebenzisa amakhamera e-oblique ezimayini, ukhiqiza ukwakhiwa kabusha kwe-3D okungabizi futhi okufinyelelekayo kanye namamodeli angaphezulu ukuze kuqhunyiswe noma kubhojwe.Lawa mamodeli asiza ukuhlaziya ngokunembile indawo okufanele ibhojwe futhi abale umthamo ozokhishwa ngemva kokuqhuma. Le datha ikuvumela ukuthi uphathe kangcono izinsiza ezifana nenani lamaloli adingekayo, njll.
I-Smart CityTourism/ukuvikelwa kwezakhiwo zasendulo
Ubuchwepheshe bezithombe ze-oblique busetshenziselwa ukuqoqa idatha yesithombe yezinsalela zomlando eziyigugu namabhilidi empeleni ukukhiqiza imodeli ye-3D yedijithali. Idatha yemodeli ingasetshenziselwa umsebenzi wokulungisa kamuva wezinsalela zamasiko nezakhiwo. Endabeni yesonto lesonto le-Fire of Notre-Dame eParis ngo-2019, umsebenzi wokubuyisela wenziwa kubhekiselwa ezithombeni zedijithali eziqoqwe ngaphambili, ezibuyisele imininingwane ye-Notre-Dame Cathedral 1: 1, ihlinzeka ngereferensi yokubuyiselwa. yalesi sakhiwo esiyigugu.
Ukwakhiwa kabusha ngemva kokuzamazama komhlaba, Umseshi nokwakhiwa kabusha kwendawo yokuqhuma, uphenyo lwendawo yenhlekelele, ucwaningo lwesimo senkundla yempi ye-3D